पुनर्निर्माणमा पुरातत्त्व–प्राधिकरण पौंठेजोरी : ऐतिहासिक घरका झ्यालढोका टहरोभित्र- समाचार - कान्तिपुर समाचार
पुनर्निर्माणमा पुरातत्त्व–प्राधिकरण पौंठेजोरी : ऐतिहासिक घरका झ्यालढोका टहरोभित्र
काठमाडौँ — पुरातत्त्व विभाग र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबीचको ‘पौंठेजोरी’ का कारण झन्डै २ शताब्दीअघि बनेको पर्वत फलेबासस्थित ‘काजीको घर’ पुनर्निर्माण अलपत्र परेको छ ।
चार वर्षअघि भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको यो घरका झ्यालढोका अहिले टहरोमा थुपारेर राखिएका छन् ।
वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनका मस्यौदाकारसमेत रहेका वकिल सुब्बा विष्णुप्रसाद पण्डितले बनाएको घर २०७२ को भूकम्पअघिसम्म पनि प्रयोगमै थियो ।
भूकम्पले भत्किएपछि विष्णुप्रसादका पाँचौं पुस्ताका भेषराज पाण्डेले यो धरोधरलाई पुरानै रूपमा उभ्याउन चाहे । त्यसपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रक्रिया र विनियममा बाँधिएर उनले ‘मौलिक नेपाली स्वरूप, परम्परागत सामग्री एवं प्रविधिबाट ३ तले घर पुनर्निर्माण गर्न’ प्रक्रियासमेत सुरु गरे ।
‘प्राधिकरण भन्छ एक तलाभन्दा माथि बनाउन पाइँदैन । पुरातत्त्व भन्छ होइन, जति तला बनाए पनि हुन्छ,’ भेषराज भन्छन्, ‘म भने यी दुवैथरी निकायको आदेशात्मक कागजात बोकेर पर्वत–काठमाडौं कुदिरहेकै छु । उता डीपीसीसम्म गरेको घरको संरचना त्यसै अड्किएर बसेको छ ।’
भेषराजका अनुसार आदिकवि भानुभक्त आचार्यले गिरिधारी भाटसँगको मुद्दामा धेरै हैरानी बेहोरेपछि उनै विष्णुप्रसादकहाँ गएर न्यायनिसाफका लागि आग्रह गरेका थिए । विष्णुप्रसादले यही काजीघरमा बसेर मुद्दामामिला र गाउँले झैंझमेलाको छिनोफानो गर्दै आएका थिए । गिरिधारी र विष्णुप्रसादको यो मुद्दामामिलाको वृत्तान्त ‘भानुभक्त रामायण’ मा समेत उल्लेखित छ ।
‘त्यो युगमा पाटनबाट कालीगढ झिकाएर यो घर बनाएको इतिहास छँदै छ,’ भेषराजले सुनाए, ‘भुइँ, माझ र सिरान तलाको पहाडी शैलीमा बनाइएको घरमा त्यसैअनुसार मनग्ये कुँदिएका झ्यालढोका जोडिएको थियो ।’ अहिले पुनर्निर्माणको प्रसंगमा प्राधिकरणले ढुंगामाटोको तीनतले घर बनाउन नमिल्ने र सहयोग अनुदानमा एकतले मात्रै बनाउन पाइने भनेपछिको कठिनाइमाझ ‘बाधा फुकाउ’ का लागि भेषराज राजधानी धाइरहेका छन् ।
पुरातत्त्व विभागका अधिकृत प्रकाश खड्काले गत वर्ष असार ४ गते पुनर्निर्माण प्राधिकरण र फलेबास नगरपालिकाका नाममा पठाएको पत्रमा घरधनी पाण्डेको ‘मौलिक स्वरूप र परम्परागत प्रविधिमा तीनतले घर पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग गर्न’ अनुरोध गरिएको छ ।
प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले असार १० गते फलेबास नगरपालिकाका नाममा पठाएको पत्रमा भने घरधनी पाण्डेले ‘ढुंगामाटोको गारोमा एक तला मात्र बनाउन पाउने व्यवस्था’ उल्लेख गरिएको छ । ‘ढुंगामाटो र काठको जोडाइकै भरमा गाउँमा ३ तले घर बनेका छन् ।
भूकम्पका कारण आंशिक क्षतिमा परेका यस्ता घर प्रबलीकरण गर्न प्राधिकरणले अनुमति दिएकै छ, तर पूर्ण क्षति भएको मेरो तीनतले घर पुनर्निर्माण गर्न किन मिल्दैन भनिएको हो ?’ भेषराज प्रश्न लिएर कुदिरहेकै छन् । एक तलाको मात्रै घर बनाएमा तीन तलाका लागि पितापुर्खाले बनाएका र जोडेका झ्यालढोका सामग्री अटाउनै नसकिने उनको दाबी छ ।
‘प्राधिकरणले नेपालीपन र नेपाली माटोको कुरा बुझ्दै नबुझी नीतिनियम रेखांकन गरेको छ । हाम्रो पहाडको भिरालो जग्गामा सधैं, सबैतिर एकतले भन्ने कसरी सम्भव हुन्छ,’ उनको दाबी छ, ‘सम्म जमिन भएको ठाउँमा एकतले घर सम्भव होला, पहाडी भीरपाखामा कहिले तल्लो खोंचबाट उठाएर माथि पुग्नुपर्छ । कसरी सम्भव छ ? एकतलामा पिँढी, बार्दली कहाँ राख्ने ? ९ हात चौडा र १५ हात लम्बाइका पहाडी घरमा एकतलाले जेनतेन सानो परिवार मात्रै आँट्न सक्ने अवस्था आउँछ ।’ भेषराज यो साता फलेबास नगरपालिकामा उपमेयर मञ्जु अधिकारीलाई भेट्न पुगेका थिए ।
अधिकारीले पनि ‘काजीको घर पुनर्निर्माण भएर पुरानै स्वरूपमा बनेमा यो भेगमा पर्यटक तान्न सकिने’ सम्भावना रहेकाले यसको स्थलगत स्वरूप र रेखांकनका लागि नगरपालिकाले छिट्टै इन्जिनियर खटाएर थप निर्णय गरिने आश्वास दिएकी छन् । ‘बरु म प्राधिकरणले दिएको भूकम्पप्रभावित ‘क वर्ग’ को कार्ड र ५० हजार रुपैयाँ फर्काउन तयार छु,’ भेषराज भन्छन्, ‘तर आफ्ना पितापुर्खाले छाडेको परम्परागत प्रविधि र मौलिकताको घरलाई आफैं भए पनि उभ्याएर देखाउन चाहन्छु ।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भेषराजको घर पुनर्निर्माणसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइमा आइसकेको बताउँदै घरधनीले चाहेअनुसार तीन तलाको घर बनाउन मिल्ने/नमिल्ने जाँचबुझका लागि स्ट्रक्चरल डिजाइनको काम जरुरी रहेको बताए । ‘म आफैंले फलेबास नागरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु अधिकारीलाई खबर गरिसकेको छु, अब भूकम्पप्रतिरोधी घर बन्न सक्नेछ भनेर इन्जिनियरले सर्वेक्षण गर्ने भएका छन्,’ श्रेष्ठले भने । प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ ०८:२३
४ भूकम्प बेहोरेका सम्पदा
वैशाख १५, २०७६ प्रदीप मेन्याङ्बो, रमेशचन्द्र अधिकारी
सुनसरी र धनकुटा — श्री ३ जंगबहादुर राणाको उदयलगत्तै साबिक धनकुटाको मौनाबुधुक (चौबिसे गाउँपालिका–७) का अदलसिंह चेम्जोङ काठमाडौं उपत्यकातिर लागेका थिए ।
धनकुटा बजारमा रहेको ५२ ढोके दरबार र चौबिसेस्थित दुई सय वर्ष पुरानो चेम्जोङ वंशको घर ।
उनलेजंगबहादुरलाई भेट्न खोज्नाको एउटै कारण थियो– आफ्नो काँचो इँटा प्रयोग गरेर बनाइएको घरमा खरको साटो झिंगटीको छानो लगाउन अनुमति लिनु । नभन्दै अदलसिंहले जंगबहादुरको दर्शन पाए र अनुमति पनि । यति काम पूरा गर्न उनलाई झन्डै एक वर्ष लाग्यो ।
अदलसिंह घर फर्कंदा उनका ६ दाजुभाइबीच अंशबन्डा भइसकेको रहेछ । दाजुभाइ नै छुट्टिएपछि उनले झिंगटी छानो लगाउने विचार नै त्यागिदिए । उनका बाबुबाजेलाई राजा रणबहादुर शाहले सुवाङ्गी (सुब्बा पद) दिएकाले अदलसिंह पनि ‘सुब्बा’ कहलिएका थिए ।
घर निर्माण भएको ठ्याक्कै मिति थाहा नभए पनि संवत् १९०३ मा आएको भूकम्पलाई यही घरले थेगेको अदलसिंहका सातौं पुस्तामा पर्ने कृष्णगोविन्द (केबी सर) ले बताए । यो हिसाबले पनि घर निर्माण भएको १ सय ७५ वर्षभन्दा बढी हुन जान्छ । जंगबहादुर राणा श्री ३ बन्नुअघि नै यो निर्माण भइसकेको हिसाबमा यो घरको आयु झन्डै २ सय वर्ष पुगेको देखिन्छ ।
राणा प्रधानमन्त्रीले दिएको अनुमति कागजसँगै चेम्जोङ वंशका अरू महत्त्वपूर्ण दस्तावेज पनि संवत् १९९० को भूकम्पमा परेर नष्ट भए । घर भने जस्ताको तस्तै रहिरह्यो । यो घरले संवत् १९०३, १९९०, २०४५ र २०७२ को भूकम्पसमेत बेहोरिसकेको छ ।
ढुंगे जगमाथि काँचो इँटाको गारोले बनाएको यो घरको दलिन र खांँवा खप्ट्याएर (डबल) लगाइएका छन् । दुईतले घरभित्र एकसाथ कम्तीमा ८० सदस्य अटाउन सक्छन् । दुई फुट चौडाको गारो र घर वर्गाकार भएकाले विनाशकारी भूकम्प थेग्न सकेको हुन सक्ने कृष्णगोविन्दले बताए । घर निर्माणमा प्रयोग गरिएका काठ सखुवाजस्तै देखिन्छन् ।
तत्कालीन समयमा ‘सुवाङ्गी’ पाएका चेम्जोङहरूले बसेर छलफल गर्ने, कागजपत्र लेख्ने, पाहुना आउँदा स्वागत गर्ने फराकिलो सिकुवासमेत बनाएका छन् । चेम्जोङ पुर्खाहरू सातौं शताब्दीदेखि हालको चौबिसे आसपासमा बस्दै आएकाले उनीहरूले बनाएका सांगुरीगढी, बोधेयक (पधे–लिम्बू भाषामा सालक बढी पाइने क्षेत्र–अप्रभंश भएर बोधे), हाम्बेक राजाको दरबार सबै इतिहासका पानामा हराएका छन् । यद्यपि, चेम्जोङ वंशका अदलसिंह र उनका भाइहरूले बनाएको घर भने ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा उभिएकै छ ।
खरले छाएको छानो पुरानो भएर पानी चुहिन थालेपछि १५ वर्षअघि चेम्जोङ परिवारले एकपटक छाएका थिए । चेम्जोङ वंशको ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वको घर भएकाले फेरि जीर्णोद्धार गर्न आफूहरू लागिपरेको चेम्जोङ वंशकै भगिराजले बताए ।
मौनाबुधुक घर भए पनि धरानमै व्यापार व्यवसाय गरेर स्थायी रूपमा बस्दै आएका भगिराजले भने, ‘कतिपय पुराना चिज फालिन्छन्, हामी बेवास्ता गर्छौं तर यो घरले लिम्बूवानको इतिहास बोकेको छ भनेर भर्खर थाहा हुँदैछ ।’ उक्त घरको कुनै पनि बनावट नबिगारी जीर्णोद्धार गरेर संग्रहालय बनाउन सकिन्छ कि भनेर पनि सल्लाह भइरहेको भगिराजले बताए । उक्त घर हाल अदलसिंहपछिको छैटौं पुस्ता भगिश्वर चेम्जोङको अंशमा परेको छ ।
५२ ढोके दरबारमा 'अंशबन्डा’
बजारको मध्यभागमा इँटाले बनेको एउटा पुरानो भवन छ । चारैतिर ढोका, कलात्मक शैली र पुरानो संरचनाले त्यसको ऐतिहासिक महत्त्वको झल्को दिन्छ । भूकम्पका कारण र उचित संरक्षण अभावमा जीर्ण देखिने उक्त भवन ५२ ढोके दरबारका रूपमा परिचित छ । धनकुटा–६ स्थित डेढ शताब्दी पुरानो भवनमा ५२ ढोका छन् ।
राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको पालामा बनेको भवन राजा त्रिभुवनका सौतेनी झाइ यक्षविक्रम शाहका लागि निर्माण गरिएको थियो । यक्षवित्रमलाई दलबल र सानसम्पत्तिसहित सरकारी सुविधा दिएर राजधानी निकाला गरिएको थियो । उनलाई धनकुटा पठाइने क्रममा दरबारसमेत बनाएर बसोबास गराइएको इतिहासविद् प्राध्यापक गोपालबहादुर भट्टराईले बताए ।
यक्षविक्रमलाई हालको परिचय होटल छेउदेखि निशान मन्दिर र भीमसेन हनुमान गुठी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण जग्गा सरकारी तबरबाट उपलब्ध गराइएको थियो । शाही परिवारले नारायणहिटीमा राजालाई गोढधुवा, टीकाभेटी, सलामीभेटी, साउने, फागुलगायतका रकम बुझाउनुपर्थ्यो ।
राजालाई सर्वसाधारणबाट दर्शनभेट गर्ने सुविधा पनि थियो । इँटालाई मास र चुनाले जोडेर भवन निर्माण गरिएको थियो । झिंगटीको छानो, फराकिलो चोक, चारैतिर झ्यालैझ्यालले सजिएको दरबार आफैंमा आकर्षक शैलीको थियो । यो दरबार व्यक्तिगत रूपमा रहेकाले यक्षविक्रमका खलकले अंशबन्डा गर्दै आएका छन् । ३६ इन्च बाक्लो गारो लगाएकाले कैयौं ठूला भूकम्पलाई समेत धानेको स्थानीयको भनाइ छ ।
५२ ढोके दरबार माक्र लामो समय यक्षवित्रमका सन्तान श्यामराजा शाह लगायतले अंशको आधारमा भोगचलन गर्दै आएका छन् । यद्यपि दरबारको एउटै भवन पनि अंशका आधारमा बाँडिएपछि अब यसको अस्तित्व लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको स्थानीय बताउँछन् ।
केही वर्ष पहिलेसम्म सग्लो अवस्थामा रहेको दरबार पछिल्लो अवस्थामा आधा भाग बिक्री भइसकेको छ । स्थानीय एक निजी विद्यालय रहेको आधा झाग दरबार व्यक्तिको नाममा बित्री भएको छ । अंशबन्डा गरिएकाले दरबार आधा खण्ड बिक्री गरिएको श्यामराजा बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत सम्पत्ति भएकाले बिक्री हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘संरक्षण गर्न भने जरुरी छ ।’
उक्त भवनको झिंगटी हटाएर हाल जस्ताले छाइएको छ । कतिपय ढोका पर्खाल लगाएर बन्द गरिएको छ । बिक्री गरिएको भवनको आधा भागमा गाँसेर टहरा र सटर बनाइँदा यसको मौलिकता लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
विद्यालयले खरिद गरेपछि पुरातत्त्व विभागमा संरक्षणका लागि पहलसमेत गरिएको प्रिन्सिपल केशव श्रेष्ठले बताए । यस्तै, संरक्षणका लागि स्थानीय प्रशासन र पुरातत्त्व विभागमा जानकारी गराउँदासमेत उचित चासो जान नसकेको स्थानीय नगेन्द्रभक्त श्रेष्ठले गुनासो पोखे ।
पुरातत्त्व विभागले गरेको सोधअनुसन्धानमा राणाकालीन वास्तुकलामा निर्माण भएको १३७ वर्ष पुरानो यो दरबार २०७२ को भूकम्पबाट ‘सामान्य क्षति मात्रै भएको’ पुष्टि भइसकेको छ ।
यो भवन भत्काउन खोजेको थाहा पाएपछि विभागले स्मारकका रूपमा रहेको यस्तो भवन आफूखुसी भत्काउन नहुने प्रावधान प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ मा रहेको उल्लेख गर्दै मर्मत/सम्भार, जीर्णोद्धार गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ ०८:२२